FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA SHAR-PEI SINOA - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Shar-Pei sinoa
Shar-Pei Bero 2 taona avy any Babrungo (Boomer), Kaunas (Litoania)
Lisitry ny alika mifangaro Shar-Pei mifangaro
Ny sinoa Shar-Pei dia alika lehibe manana hoditra miketrona. Izy io dia manana profil efajoro misy lohany malalaka sy fisaka. Ny sakelaka dia malalaka, matevina ary feno, miaraka amina fijanonana antonony. Toy ny Chow Chow , manana lela manga-mainty ireo alika ireo. Mihaona ny nify amin'ny kaikitry ny hety. Ny maso kely, milentika, miendrika almond dia maizina, fa mety ho maivana kokoa amin'ny alika miaraka amin'ny palitao miloko marevaka. Ny sofina avo lenta sy telozoro dia kely ary somary boribory eo amin'ny tendrony. Ny rambony dia matevina amin'ny fotony, manidina amin'ny teboka tsara ary avo dia avo. Esorina ireo lalandava. Samy alika miketrona be dia be ny lohany ary ny alika kely loha manana hodiny somary tery kokoa no hita ao amin'io karazany io. Ny kiritika dia manana ketrona bebe kokoa noho ny olon-dehibe. Shar-Pei very maina ny ketrona rehefa mihalehibe izy ireo. Misy karazany telo ny palitao: palitao soavaly, palitao borosy ary palitao tsy dia fahita firy, izay tsy eken'ny AKC. Ny palitao bera dia tsy tafiditra ao anatin'ny fenitry AKC satria ity Shar-Pei manokana ity dia manana akanjo lava sy akanjo ambony mihoatra ny 1 santimetatra. Ny teoria malaza momba ny palitao dia ny 'famerenana' an'i Chow-Chow. Tena malaza izy ireo satria ny kalitaon'ny biby fiompy Shar-Pei, na dia tsy fahita firy aza, ary matetika mifangaro amin'ny Chow ataon'ireo tompona tsy mahalala ary koa mpiasan'ny biby. Ny palitao soavaly tsy mahazatra dia masiaka raha mikasika azy, tena maratra ary tsy mihetsika. Ny karazany mifono borosy dia manana volo lava kokoa ary fahatsapana malefaka kokoa. Ny palitao amin'ny karazany rehetra dia mety hatramin'ny iray santimetatra ny halavany. Ny loko palitao dia misy loko sy sabola matevina rehetra. Misy ihany koa ny palitao Shar-Pei miloko (misy voninkazo) milatsaka (misy voninkazo), izay lesoka tsy mendrika amin'ny peratra fampisehoana araka ny fenitry ny AKC.
Ny Shar-Pei dia mahatoky amin'ny mpikarakara azy. Manan-tsaina filalaovana, mavitrika, manjaka ary be herim-po, mifamatotra amin'ny fianakaviany izy io, nefa tsy tia olona. Raha mifanena amin'ny saka sy ny zaza ny alika raha mbola tanora dia matetika dia tsy hanana olana amin'izy ireo. Ny sinoa Shar-Pei dia mandeha mora, milamina, mahaleo tena ary be fandavan-tena. Izy io dia mahatonga ny namana mahafinaritra sy mpitily tsara. Mila mpitantana matoky tena ny Shar-Pei. Raha tsy azonao antoka, tsy mifanaraka, malefaka na malefaka loatra eo imason'ny alika dia handray ny toerany izy. Ny Shar-Pei dia mila manana fahefana matanjaka, nefa malefaka ary tsy miova. Ny alika dia tsy maintsy ampianarina ny olombelona rehetra dia eo amboniny amin'ny filaharany. Ireo izay mahita ny tenany ho ambony olona ho mafy hatoka sy ho sahy. Mila fiofanana fankatoavana mafy ity karazana ity mba hametrahana ny fitarihanao. Mety holavin'izy ireo ny baiko avy amin'ny olona ao amin'ny fianakaviana izay tsy nametraka mpitarika ho azy ireo. Mila tompona manana fahaizana izy ireo mpitondra . Matetika ny Shar-Pei dia tsy tia rano ary matetika manandrana manalavitra azy. Madio ity karazana ity ary iray amin'ireo karazana mora kokoa amin'ny famaky trano . Indraindray ny fampifangaroana alika hafa dia raha toa ka mampiseho fihetsika manjakazaka ny iray amin'ireo alika. -piaraha-monina dia zava-dehibe. Na izany aza, ny Shar-Pei sasany dia tsy dia manjaka loatra ary ny hafa ary mampiseho ny tsipika dia toa tsy dia mahery setra loatra, mifangaro tsara amin'ny alika hafa. Ny sasany an'i Shar-Pei dia mirona amin'ny filokana, indrindra rehefa marary. Zava-dehibe ny mitady mpiompy mendri-kaja rehefa mitady Shar-Pei. Ity karazana ity dia nalaza be tamin'ny taona 1980. Izy io dia nantsoina ho iray amin'ireo 'Yuppie Puppies', izay midika fa io dia iray amin'ireo karazan-java-maniry tsy nohajaina loatra. ny toetran'ny alika miankina amin'ny fomba itondran'ny tompony ny alika. Ny alika avela hino fa izy ireo no lehiben'ny olombelona dia hiteraka olana eo amin'ny fitondran-tena. Alika tsy alaina mandeha isan'andro ny fonosana dia hanomboka hampiseho ambaratonga olana isan-karazany koa.
Hahavony: 18 - 20 santimetatra (46 - 51 cm)
Lanja: 40 - 55 pounds (18 - 25 kg)
Mora amin'ny tsy fahombiazan'ny voa (amolydosis) izay miteraka tazo sy fivontosana hock syndrome. Hevi-diso iray dia hoe manana olana amin'ny hoditra ny Shar-Pei noho ny ketrona. Eny, manana olana amin'ny hoditra ny Shar-Pei sasany, saingy tsy hoe noho ny ketrona ny alika, fa ny toe-piainana nolovainy. Noho ny halaza be loatra tamin'ny taona 1980 dia misy olana amin'ny hoditra nolovaina ny Shar-Pei sasany. Na izany aza, raha mividy amin'ny mpiompy malaza ianao dia tsy tokony ho olana io aretina io. Mora amin'ny fivontosan'ny sela . Aza hadino ny mahita mpiompy izay miezaka mitady alika salama.
Tsy maninona ny Sinoa Shar-Pei ao amin'ny trano iray raha toa ka ampiasaina tsara. Mavitrika ao an-trano izy io ary tsy haninona raha tsy misy tokontany.
Ny Shar-Pei dia mora tohina amin'ny toetr'andro mafana, ny ampahany dia noho ny ketrona amin'ny lohany mitazona ny hafanana.
Amin'ny andro mafana dia tokony omena alokaloka foana. Tokony hisy rano amin'ny fotoana rehetra. Raha mahazo fanatanjahan-tena ampy izy ireo, dia hilamina ao an-trano.
Ny Sinoa Shar-Pei dia mila fanatanjahan-tena, izay misy isan'andro MANDEHANA . Na dia eny am-pandehanana aza ny alika dia tsy maintsy ampidirina amin'ny sisin-tongony na ao ambadik'ilay olona mitazona firaka, satria ao an-tsain'ny alika ny mpitarika no mitarika ny làlana, ary ny mpitondra dia tokony ho olombelona. Aza ampiasaina amin'ny hafanana be loatra izy ireo satria mora tohina.
Hatramin'ny 10 taona.
Ny Shar-Pei dia tokony hosasana tsy tapaka. Ny volon'izy ireo dia tsy voahaingo mihintsy. Ity karazana ity dia tsy manana akanjo lava. Ny palitao 'bush' dia nilatsaka herintaona mandavantaona, fa ny palitao 'soavaly' kosa mirona mandritra ny fe-potoana famolahana. Ny molting dia mety hamela ilay alika ho tsy rototra. Ny fandroana tokony ho indray mandeha isan-kerinandro sy ny fanosorana ny palitao isan'andro mandritra io vanim-potoana io dia hanala ilay volo efa maty ary hamela ilay palitao vaovao hitombo. Ny palitao henjana indraindray dia mety hiteraka olana amin'ireo olona mora tohina.
Ny razamben'ny Shar-Pei dia tsy azo antoka. Ny sary amin'ny tanimanga dia milaza fa efa nisy hatramin'ny taona 206 talohan'i Kristy. Mety ho taranaky ny Chow Chow na izany aza, ny hany fifandraisana mazava eo anelanelan'ny karazany roa dia ny lela volomparasy. Ny anarana 'Shar-Pei' dia midika palitao fasika. Ny alika dia nampiasaina ho alika fiompiana miasa marobe ho an'ny sinoa, mihaza, manara-dia, ho mpihaza, miompy, miaro tahiry, ary miambina ny trano sy ny fianakaviana. Niasa am-pifaliana ny alika tontolo andro. Nampiasaina tamin'ny hetsika ady amin'ny alika izay nanenenan'ilay hoditra malemy sy palitao maranitra koa ilay alika hafa. Nino ny Sinoa fa ny sarin'ny ketrona sy ny vavan'ny volo mainty dia hampatahotra ny fanahy ratsy rehetra. Nandritra ny Tolom-piavotan'ny Kominista dia nihena ny isan'ny mponina Shar-Pei. Tamin'ny taona 1973, mpandraharaha iray any Hong Kong, antsoina hoe Matgo Law, dia nahazo vitsivitsy tamin'ireo alika ireo tamin'ny fikasana hamonjy ilay karazany. Nahasarika ny sain'ny olona tamin'ny alàlan'ny magazine amerikana iray izy. Amin'ireto alika vitsivitsy ireto dia nisondrotra izaitsizy ny isan'i Shar-Pei ary io dia iray amin'ireo karazany malaza kokoa any Etazonia. Ny sinoa Shar-Pei dia neken'ny AKC voalohany tamin'ny taona 1992. Ny alika dia manana alika 70,000 voasoratra ho tahiry fototra.
'Ity no vehivavy vavy malalako Shar Pei, 6 volana, antsoina hoe Shina.'
Bailey T. roa taona dia monina any Mechanicsburg, PA. Bailey dia nahazo ny lohateny Canine Good Citizen (CDC) sy Therapy Dog International Titles (TDI).
Ity dia Dobramil Fu Chou 10 herinandro, fananan'i R. & M. Vance, c / - Chienparadis Dogue De Bordeaux.
Phoebe the Bear dia ohatra iray amin'ny akanjo-bera Shar-Pei
Earl the Shar-Pei amin'ny 1 taona— 'Earl dia tsy manoa sy maditra , fa mahatoky sy be fitiavana. Ity dia miala sasatra i Earl. Mipetraka any Aostralia izy
'Miss Maddy Kay dia soooooo feno fitiavana na amin'ny fanomezana na amin'ny fandraisana. Alika mpamonjy i Maddy ary tototry ny fiainany vaovao miaraka amiko. Nahavita ny asa 'misiona' izahay ary niditra an-tsehatra tamin'ny fandaharana 'Read' tany amin'ireo sekoly ambaratonga voalohany sy hopitaly. Maddy tia ankizy ary manenjika lolo. Zavaboary tokana izy - misy cockatiel roa ao an-trano izay nampiofanina hifaneraserana am-pitiavana ary koa voromailala roa teo aloha. '
Miss Maddy Kay ilay Sinoa Shar Pei mankafy ny torapasika
'Sophie dia Shar-Pei mainty aseho eto toy ny alika kely 5 volana. Manana toetra manokana izy ary be hevitra amin'ny zavatra rehetra. Tiany ny manenjika ny saka roa ananantsika (ary enjehin'izy ireo ihany koa) ary milalao ny kilalao mitsitokotoko. Manana angovo be i Sophie fa mampiasa ny angovo ao anaty fitsofana haingana ka rehefa nandany izy dia lany amin'ny tany mangatsiaka mangatsiaka mandritra ny adiny iray. Afaka ny ho izy bossy ary tena tovovavy sy andriambavy kely izy, saingy tsy manakana azy tsy ho be fitiavana sy be fitiavana izany. I Sophie aza dia miresaka amin'ny tabataba isan-karazany! Tena toy ny a izy olona kely volo . Taorian'ny fahafatesan'ny namako akaiky noho ny leukemia mahery, a labrador sôkôla antsoina hoe Molly, izay namonjy ny aiko taorian'ny nahitanay roa tamin'ny lozam-pifamoivoizana ratsy iray, tena kivy tanteraka aho ka tsy naniry alika hafa. I Sophie no teo an-dafin'i Polly mifanohitra amin'i Molly, saingy tsy afaka nitia azy intsony aho.
Titus ilay zanak'alika sinoa Shar Pei amin'ny faha-4 volana— 'Ity no Titosy. Izy no alika ao amin'ny fianakaviana ary rehefa lazaiko hoe fianakaviana, ny reniko, ny dadako ary ny rafozako no miantso azy hoe dadaben'izy ireo. Izy dia zazakely kely volo. Tena mavitrika izy ary tia mihazakazaka manodidina ny lalao baolina kitra. Manan-janaka 4 aho ary latsaky ny 10 taona dia tsara manodidina azy izy ireo. '
Jereo ny ohatra misimisy kokoa momba ny Sinoa Shar-Pei
Fampahalalana sinoa Shar-Pei
Sary Sinoa Shar-Pei 1
Sary Sinoa Shar-Pei 2
Sary Sinoa Shar-Pei 3
Sary Sinoa Shar-Pei 4
Alika Shar-Pei: Sarivongana Vintage azo angonina
laboratoara mainty shiba inu mix
Terre boston 4 volana
sy fotsy volo lehibe Dane
shiba inu miharo chihuahua